DAAWO-Muuse Suudi Yalaxow,”Beelaha Muddulood madaxweyne iyo ra’iisul wasaare raba ma joogo, waxaa matala dad la haysto”.
October 16, 2020 Xuseen 1
Senator Muuse Suudi Yalaxaw oo ka hadlayey munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo arrimo quseeya beelaha Muddulood oo ah halka uu ka soo jeedo Xildhibaanku.
Muuse Suudi Yalaxow, ayaa sheegay in beeshu aysan xilligaan awood ku lahayn xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya aysanna jirin meel looga baahan yahay oo uu ula jeedey kuraasta ugu sarraysa ee looga arrimiyo dowladda federalka ah ee Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in siyaasiyiinta ugu jira dowladda Soomaaliya aysan ahayn shaqsiyaad wax qaban kara ama danaha beesha ku matali kara Soomaaliya, wuxuuna caddeyey inuusan dalka joogin madaxweyne, Ra’iisul wasaare ama guddoomiye barlamaan oo raba beelaha Muddulood.
“Nimanka kujira dad wax meel marinkar ma ahan, dad doodi kara ma ahan, waa dad laga awood badan yahay, dad arrimohoodii maaraystay iyo dad aan dowlad goboleedkoodii dhisnayn oo haddii wax hala qabto la yiraahdo gacanta loo tagayoo lagu diidayo ayaa labada aqal kujira”. ayuu yiri Muuse Suudi Yalaxaw.
“Madaxweyne Raba ma joogi, ra’iisul wasaare rabana sooma marin haddana inay ayagii iscoleeyaan maahee qof wax u qaban hee oo ay filanayaan majirto iyagaa la rabaa inay dhulka ka kacaan, hoggaan dhaqanna ma helin”, ayuu yiri mar kale.
ABGAAL OSMAN, QURUF QURUFNA MA DAAYAAN, QORSHENA MA KEENAAN, 2 MADAXWEYNE AAD HESHEEN, WAXBA SOMALI UMA QABAN, WAXBA IDIINMA QABAN, MUQDISHO MAAMUUS UMA SAMAYN, MAYOR LA DOORTO UMA SAMAYN
MARKAA YAA EEDAYNAYSAAN, GARTIINA AKHRISTA, 50 SANNO OO SOO SOCDA MADAXWEYNE MA NOQONAYSAAN, WAKHTIGIINA SUGA,